मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न ९९ स्वास्थ्य संस्था छानिए,कुन-कुन परे छनौटमा ? (सूचीसहित) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न ९९ स्वास्थ्य संस्था छानिए,कुन-कुन परे छनौटमा ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ९९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई छनौट गरेको छ । मलेसिया रोजगारीका लागि इच्छुक दुई सय ९० स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनमा ९९ योग्य देखिएका हुन्।
यसअघि ३७ संस्थाले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए। एउटा भने यो अनुगमनमा अयोग्य देखिएको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि आवेदन दिएका २९० वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये ९९ वटा छनौटमा परेका हुन् ।
मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना जारि गर्दै छनौटमा परेका ९९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले यसअघि विशेष प्राविधिक टोलीलाई स्थलगत अनुगमनमा खटाई त्यही टोलीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा स्वास्थ्य संस्था छनौट गरेको बताएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था छनौटका लागि गत चैत्र १८ मा सार्वजनिक सूचना निकाली आवेदन माग गरेको थियो । मन्त्रालयले मागेको आवेदनमा २९० वटा स्वास्थ्य संस्थाले सहभागिता जनाएका थिए ।
राहतमा पनि पैसाको चलखेल, ५० रुपैयाँ तिर्न नसक्दा राहत दिइएन
भदौं ५, काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिका–४, पुल्चोकका ३५ वर्षीय सन्तोष उराव र ४० वर्षीय घनश्याम मलाहा राहतको […]
राष्ट्रपतिमा एमाले र काँग्रेसको छुट्टा छुट्टै दाबी
काठमाडौं, राष्ट्रपति चयनका लागि सहमति जुटाउन आज भएको सर्वदलीय बैठक बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको छ […]
बिद्यार्थीहरुले नेताहरुलाई खिजाउदै निदाएको जुलुस गर्ने
पुस २ । काठमाडौं, संविधान निर्माणको काम ढिला गरेकोमा सभासदहरुलाई आक्रोस पोख्दै ११ विद्यार्थी संगठनले […]
सरकारको यस्तो छ भूकम्प दिवसको तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक […]
अमेरिका जाने हो ? यस्तो छ भिसा आवेदकका लागि नयाँ नियम
काठमाडौं । अमेरिका जान डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नयाँ नयाँ नियम लगाउन थालेको छ । अमेरिकाले अब भिसा आवदेन दिन […]